Lammaanaha lacagta waaweyn. Qeybta 1: Yurub iyo Ameerika | vfxAlert official blog
Lammaanaha lacagta waaweyn. Qeybta 1: Yurub iyo Ameerika
Dhibaatada doorashada hantida ganacsiga waxaa si fiican u yaqaan ganacsatada cusub ee fiiriya liiska ganacsiyada suurtagalka ah ee barnaamijka calaamadaha binary . Dabcan, waxaad kaheli kartaa macaash joogto ah meelkasta - laga bilaabo kaydka ilaa mustaqbalka iyo xulashooyinka. Si kastaba ha noqotee, haddii aad tahay bilowga hore ee xirfaddaada oo aadan khibrad kuugu filan u lahayn qalabka maaliyadeed ee adag, markaa xalka ugu fiican ayaa ah in la doorto lamaanaha lacagta ugu muhiimsan.
Boqolleydaani waa celcelis ahaan waxaana loogu talagalay ujeeddooyin macluumaad oo keliya!
Labada lamaane ee ugu muhiimsan, oo xisaabiya illaa 30% mugga macaamil ganacsi ee suuqa Forex iyo tirada calaamadaha ikhtiyaariga ikhtiyaariga ah ee dhabta ah .
Marka lagu daro doolarka Mareykanka, lacagta EC waxay aasaas u tahay socodka dhaqaale ee suuqyada saamiyada iyo sarifka lacagaha qalaad. Marka lagu daro qandaraasyada barta, dhammaan noocyada qalabka maaliyadeed waxaa lagu soo bandhigayaa euro: mustaqbalka lacagta, ikhtiyaarrada, soo-saarka, saamiyada lacagaha ETF, tusmooyinka sarrifka saamiyada ee Yurub. EUR / USD sidoo kale waxay saameyneysaa lammaanaha Aasiya, sidaa darteed, ganacsatada oo dhami waa inay awoodaan inay fahmaan dhaqdhaqaaqooda.
Waxaa jira mug weyn oo falanqeyn ah, tirakoobka dhaqaalaha iyo xog kale oo ka mid ah Eurozone, oo ku saleysan taas oo aad ku sameyn kartid saadaalin tayo sare leh dhammaan hantida EUR marka lagu daro calaamadaha binary ee bilaashka ah . Tilmaamayaasha Mareykanka, isbeddelada suuqyada badeecadaha, ficilada bangiyada waaweyn sidoo kale saameyn ayey leeyihiin. Tixgelintooda oo faahfaahsan ayaa ka baxsan baaxadda maqaalka; waxaan fiiro gaar ah u yeelan doonaa oo keliya qodobbada soo socda:
Khudbadaha madaxa iyo go'aamada Bangiga Dhexe ee Yurub (ECB) waa warar aasaasi ah oo si buuxda u beddeli kara isbeddelka hadda jira, oo aan lagu xusin falalka mala awaalka ah ee warbixinnada saddex-biloodlaha iyo sannadlaha ah.
Xogta GDP (Waxsoosaarka Guud ee Qaranka), sicir bararka, shaqaalaynta, iyo tusmooyinka kaydka ee waddamada EU, sida Jarmalka DAX, ma laha saamayn weyn. Xogta hordhaca ah ayaa si dhif ah uga duwan saadaasha; falcelinta suuqa inta badan waa la shaqeeyaa ka hor inta aan la sii deyn. Marka laga reebo marka xogta hordhaca ah ay ku xiran tahay dib u eegis muhiim ah markaa waxaa jiri kara kororka muddada-gaaban ee EUR / GBP iyo EUR / JPY.
Maaddaama ay yihiin labada lamaane ee aasaasiga u ah lacagta Euro, dhammaan dillaaliintu waxay leeyihiin faafin yar iyo saxnaanta ugu badan ee xigashooyinka (illaa kuwa saxda ah). Waxqabadka ugu badan wuxuu ku dhacayaa fadhiga Yurub, laakiin iskutallaabtiisa EUR / JPY waxaad ka heli kartaa faa'iido deggan muddada Aasiya.
Dhammaan hantida ay ku jiraan Euro waxay si fiican ula shaqeeyaan farsamooyinka iyo qaababka laambadda-shumaca. Istaraatiijiyad kasta oo ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah ayaa lagu dabaqi karaa: isbeddel, xoqid, xayndaab, kala goyn / kala-soocid, heerarka taageerada / iska caabinta, iyo kuwa kale. Laakiin macaamillada dhexdhexaadka ah iyo kuwa muddada-dheerba ah waxaa ka wanaagsan in diiradda la saaro ikhtiyaarrada isbeddelaya - in la beddelo jihada waxay u baahan tahay xog aasaasi ah oo xoog leh, badiyaa tan xun;
Waxaa jira kaliya labo xiriir oo adag: dahab iyo saliid (Brend, WTI);
Ku dhowaad nus ka mid ah mugga ganacsiga ee Euro waxaa lagu xisaabiyaa labo-labo, midka ugu muhiimsanna waa EUR / GBP (Euro / Pound sterling): isbeddelka xasilloonida ee 70-80 dhibcaha oo ay weheliso faafitaanno yaryar ayaa kuu oggolaanaya inaad isticmaasho calaamadda ganacsiga laba-geesoodka ah xitaa xoqidda.
Tirakoobyada ku saabsan saameynta suuqa Forex waa kuwo iska horimanaya, laakiin haddii aad qaadato qiyamka celceliska, isbeddelka maalinlaha ah waa ugu yaraan 9-11% wadarta mugga.
Xaqiiqda ah in mid ka mid ah dhaqaalaha adduunka hogaaminaya uusan ku biirin Eurozone waxay abuurtay xaalad gaar ah suuqa sarifka lacagaha qalaad - miisaan culus oo gaaraya EUR / USD oo ay kujirto dareemo sare ayaa muuqday.
Aftida Brexit, in kasta oo ay sababtay hoos u dhac ba'an ee poundka iyo isu dheelitir la'aanta guud ee dhaqdhaqaaqa lamaanayaasha waaweyn, ganacsiga laba-geesoodka ah ee bilaashka ah wuu sii socdaa dhacdooyinka aasaasiga ah ee muhiimka ahna weli isma beddelin:
Falalka Bank of England (BOE) . Wararka ugu muhiimsan waa heerka dulsaarka, oo dib loo eegi karo kadib daabacaadda hordhaca ah. Khudbadaha dadka muhiimka ahi badanaa ma keenaan dhaqdhaqaaqyo xoog leh.
GDP (wax soo saarka guud ee qaranka) . Waxaa loo xisaabiyaa bille waxaana la daabici karaa seddex jeer (hordhac ah, dib loo eegay, iyo kan ugu dambeeya). Sidaa darteed, falcelinta lacagta poundka iyo labada lammaane ee lacagta ah badanaa waa la daahiyaa.
Xogta sare : Tusmada dhaqdhaqaaqa ganacsiga, heerka shaqo la'aanta, danta macaamiisha iyo tusmooyinka iibka tafaariiqda.
Dhaqdhaqaaqa isku dhafan ee poundka iyo Euro, xitaa haddii dib loo dhigo, wuxuu sii ahaanayaa mabda'a aasaasiga ah ee falanqaynta farsamada ee labada lamaane. Liquidity wuxuu sii wadaa inuu sarreeyo maalinta ganacsiga oo dhan, maahan oo keliya kal-fadhiga Yurub.
Qiyaasta ayaa sii socota oo lagu taageerayaa ficillada ECB iyo BOE, ikhtiyaarka iyo badeecadaha mustaqbalka iyo ficillada mala-awaalka ah ee gumeysigii hore ee gobolka Aasiya waqtiga la sii daayo wararka muhiimka ah iyo warbixinta. GBP / USD sidoo kale waxaa si firfircoon loogu adeegsadaa is-weydaarsiga iyo macaamillada oodda.
Natiijooyinka ugu fiican waxaa lagu muujiyaa istiraatiijiyado dhexdhexaad ah iyo waqti-dheer ah iyo qashin-dilis intraday. Hababka Burburka / Dib-u-celinta ee heerarka qiimaha waxay siinayaan tiro badan oo calaamado been ah!
Lammaanaha iskutallaabta ah ee leh GBP waxay u shaqeeyaan si la mid ah Euro, sida falanqaynta taxaddar leh ee hantida labaad, ayaa had iyo jeer loo baahan yahay.
Maalintii 4-% ee wadarta mugga Forex.
In kasta oo ay tiro yar yihiin, franka Swiss-ka ayaan ka liidan lammaanaha kale ee waaweyn ee muhiimada u leh suuqa sarifka lacagaha qalaad waxayna caan ku tahay dhamaan meheradaha ganacsiga binary . Xasiloonida dhaqaalaha iyo kalsoonida qarniyadii hore ee waaxda bangiyada ayaa soo jiidatay maalgashadayaasha iyo USD / CHF waxay sii ahaaneysaa "magangalyada lacagta" ugu kalsoon.
Ilaa May 15, 2015, labada lamaane waxay ku xirnaayeen dhaqdhaqaaqa EUR / USD, iyo joojinta lama filaanka ah ee marinka lacagta waxay horseedday koror ah 20-30% marka la barbar dhigo kuwa kale ee waaweyn ee lacagta, taas oo horseedday isku dheelitirnaan la'aan kaliya lacagta laakiin suuqa saamiyada Yurub oo dhan. Kadib waxaa jiray sixitaan qiimo macquul ah, oo ay ku xigto kor u kac, taas oo si xilliyo ah loo arkay illaa iyo hadda.
Bangiga Qaranka ee Switzerland (SNB) wuxuu leeyahay siyaasad dulsaar dulsaar eber iyo mid taban si loo ilaaliyo maalgashiga dibedda iyo sicir bararka oo hooseeya. Marka lagu daro xogta SNB, wararka muhiimka ah iyo tirakoobyada Us waxay saameyn ku leeyihiin koorsada.
Isbeddelka USD / CHF waa mid hagaagsan oo aan dhaqdhaqaaqyo lama filaan ah, taas oo suurtagal ka dhigeysa in si wax ku ool ah loo isticmaalo dhammaan qaababka garaafka iyo farsamooyinka aasaasiga ah si loo xaqiijiyo calaamadaha binary auto . Adoo adeegsanaya istaraatiijiyad ku habboon kulan kasta waxaad ka faa'iideysan kartaa maalinta oo dhan!
Tilmaamaha ganacsiga USD / CHF:
Dhibaatada ugu weyni waa dhaqdhaqaaq xilliyeed ku jira cidhiidhi cakiran oo leh dib-u-soo-noqoshada dambe ee isbeddelka. Sidaa darteed, waxaan xireynaa booska haddii aysan jirin dhaqdhaqaaq muuqda oo loogu talagalay 5-7 baararka ama calaamadaha ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah ;
Ka dib markii la joojiyay marinka lacagta, sicirka ayaa ku wareegaya xaddiga lagu muujiyey shaxanka, illaa iyo haddana ma jiraan wax shuruudo ah oo looga gudbo. Sidaa darteed, waxaan uga baayacmushtaraynaa dib u soo kabasho, taas oo ay u badan tahay;
Frank Swiss wuxuu ku dhawaaqay isbeddelo xilliyeed oo lagu dari karo istiraatiijiyado muddada-dheer ah.
Tusaalooyinka sida ikhtiyaariyada ikhtiyaariga ahi u muujiyaan :
Sida laga soo xigtay ilo kala duwan, 5-7% suuqa maalinlaha ah.
Doolarka Kanadiyaanka ayaa ah lammaanaha ugu muhiimsan ee Ameerika. Xaaladda siyaasadeed ee xasilloon, siyaasadda lacageed ee la saadaalin karo ee Bangiga Dhexe iyo tirakoobka ballaaran ee falanqaynta faahfaahsan iyo saadaasha tayada sare leh ayaa ka dhigaysa mid soo jiidasho leh ganacsatada ikhtiyaariga ah ee ikhtiyaariga ah .
Deganaanshaha siyaasadeed iyo hufnaanta siyaasadda lacagta ayaa ka dhigaya doolarka Kanada inuu soo jiito ganacsatada, marka lagu daro tababarka farsamada, leh xirfadaha gorfaynta aasaasiga ah. Tiro badan oo macluumaad ah iyo tirakoobyo laxiriira CAD ayaa bixiya aasaaska falanqaynta noocyada kala duwan waxayna kuu ogolaaneysaa inaad sameyso saadaal dhameystiran,
Ugu horreyntii, dhaqaalaheennu wuxuu saameyn ku leeyahay xigashooyinka, maaddaama dhibaatadii 2007-2009 ka hor ay jirtay xiriir toos ah oo ka soo horjeedka doollarka Mareykanka, oo inta badan aan tixgelin siin calaamadaha binary ee nool ee bilaashka ah . Xuduudaha ugu muhiimsan: farqiga u dhexeeya dulsaarka Bangiga Dhexe ee Kanada iyo Nidaamka Kaydka Federaalka (FRS), mugga wax soo saarka, heerka shaqada iyo dhaqdhaqaaqa ganacsiga, bayaannada siyaasadeed.
Kordhinta qiimaha saliidda. Marka lagu daro saliida dhaqameed (fudud), waxaa jira keyd badan oo saliid ah (culus) oo u baahan shaqaale iyo tamar badan si loo farsameeyo. Kanada waxay awoodday inay xalliso dhibaatadan iyo dhoofinta alaabta ceeriin ee ka baxsan gobolka.
Deganaanshaha dhaqaalaha waxaa lagu bixiyaa xaaladda gaarka ah ee "lacagta hoyga", sida Swiss franc. Sidaa darteed, xilliyada xasillooni darrada, raasamaalka laga helo lamaanayaasha kale ee waaweyn wuxuu bilaabaa inuu u guuro Kanada, isagoo xoojinaya heerka sarrifka.
Labada lamaane waxaa loo tixgeliyaa inay yihiin kuwo farsamo ahaan ah, istiraatiijiyadda ugu weyni waa mid dhexdhexaad ah iyo mid muddo-dheer socotaa iyada oo ay ugu wacan tahay burburka soo noqnoqda ee been-abuurka ah ee aan Mareykan ahayn (oo ah kan ugu weyn) kulammada ganacsiga.
Sidoo kale, tixgeli waxyaabaha soo socda:
In kasta oo ku dhowaad 60% macaamilku ay ku jiraan hantida ugu weyn, haddana isweydaarsiga CAD wuxuu sidoo kale siin karaa faa'iido wanaagsan, xitaa iyadoo la xoqayo. Way kafiican tahay in laga ganacsado ikhtiyaariyada binary -ga ee mudada gaaban forex signal s kulamada Yurub (EUR / CAD, GBP / CAD iyo CHF / CAD) iyo kulamada Aasiya (AUD / CAD iyo CAD / JPY). Waxaa jiri kara mala awaal mala awaal ah 90-120 dhibcood; sidaa darteed, maamulka lacagta adag ayaa loo baahan yahay;
Doolarka Kanada waa xaqiijin cad oo ah xaqiiqda ah in xiriir kasta oo ka dhexeeyaa uu yahay ifafaale ku-meel-gaadh ah dhaqaalaha adduunka ee sida xawliga ah isu beddelaya. Waddanku wuxuu ku jiraa TOP 10 soosaarida biraha warshadaha qaaliga ah iyo kuwa aan birta ahayn, laakiin tani saameyn kuma yeelanayso USD / CAD. Ka reebida waxyaabaha saliida iyo saliida;
Qaybta labaad ee maqaalka, akhri sida loo barto ikhtiyaar ikhtiyaari ikhtiyaari ikhtiyaari ah oo ku saabsan ganacsiga lamaanaha waaweyn ee gobolka Aasiya.